रोचक Archives - Daily Lokmandu
अछाम : साँफेबगर नगरपालिका-२ जाल्पादेवी श्रीकोटस्थित त्रिपुरा बहुमुखी क्याम्पसको भवन निमार्णका लागि जग खन्ने क्रममा सुन र चाँदी भेटिएको छ। चार कोठे भवनको पिल्लरका लागि जग खन्ने क्रममा मजदुरले १९ तोला ८९ लाल अर्थात् २ सय ३१ दशमलब ६७ ग्राम सुन र १ सय ३२ तोला ७३ लाल अर्थात् १५ सय ४८ ग्राम चाँदी फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। फेला पारेको सुनचाँदी इलाका प्रहरी कार्यालय साँफेबगरमा राखिएको छ। मजदुरहरु बीच भागबण्डामा विवाद भएपछि कुरा बाहिर आएको वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कालुसिंह कुँवरले बताए। उनले भने, ‘करिब एक हप्ता अगाडी नै फेला परेको सुन चाँदी हो, तर मजदुरबीच कुरा नमिल्दा हिजो मात्र बाहिर आएपछि थाहा भयो। अहिले प्रहरीको निगरानीमा खन्ने काम भइरहेको छ।सो ठाउँबाट पुराना भगवानका मूर्ति समेत फेला परेका छन् ।’ ‘पहिले राजाको बसोबास रहेको ठाउँ भएकाले पुराना सुनचाँदीहरु भेटिएको हो,’ उनले भने।फेला पर
नेपालगञ्ज । भारतम प्रतिबन्धित माछा नेपालमा खुलेआम बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । भारतको आन्ध्रप्रदेशमा उत्पादन हुने र विषादीयुक्त रसायनसहित नेपाल आउने माछा नेपालगञ्जका बजारमा छ्याप्तछ्याप्ती भेटिने गरेका हुन् । भारतबाट आयात हुने माछा नेपालगञ्ज पुग्न छिटोमा पनि एक साता लाग्छ । कहिलेकाहीँ १० देखि १२ दिन पनि लाग्ने माछा व्यवसायी बताउँछन् । ‘फर्मलिन (लामो समयसम्म नकुहियोस् भनेर प्रयोग गरिने केमिकल) सहितको माछा आन्धप्रदेशबाट ६ दिनभित्र नेपालगञ्ज आउँछ,’ नेपालगञ्जको हिमालय अर्डर एन्ड सप्लार्यसका सञ्चालक अकिल अहमद भन्छन्, ‘एक दिन आइसमा राखेन भने त्यो कुहिन्छ ।’ फर्मलिन लामो समय राख्नुपर्ने लास नकुहियोस् भनेर संसारभरी त्यही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नेगरी बनाइएको एक केमिकल हो । यो पनि पढ्नुस मृगौला सफाई कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस घरेलु उपचार विधि मृगौला खराब भएर बर्षेनी सैयौंले ज्यान
काठमाडौं । पर्यटन गन्तव्यमा नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट देशको सूची भित्र पर्ने गर्दछ । प्राकृतिक विपत्ति र अन्य कारणले ओरालो लागेका बेलामा विश्वका चर्चित गन्तव्यमा नेपाल परिरहनुले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने निश्चित छ । हो, घुम्नका लागि उपयुक्त मौसम छनोट गर्नुहोस् । न जाडो, न त गर्मीे यस्तो मौसमलाई घुमघामको सिजन भन्दा पनि हुन्छ । नेपालका सुन्दर र रमणीय पर्यटकीय गन्तव्यबारे हामी तपाईंलाई जानकारी दिँदै छौं, ता कि बिदाको समय घुमेर सदुपयोग गर्नुहोस् । नेपालका उत्कृष्ट १० गन्तव्यहरूः सगरमाथा नेपाल आउने पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा पर्ने स्थानमध्ये एक हो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज यात्रा अर्थात् सगरमाथा पदयात्रा । यो पदयात्रामा बर्सेनि हजारौंको संख्यामा पर्यटक आउने गर्छन् । कोही विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाल आउँछन् भने कोही सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पदयात्रा गरेर
रितिक अधिकारी । नेपाल विश्वमा जल स्रोतको दोस्रो धनी देश हो । जसले नेपालमा मात्र नभई कतारमा समेत खाने पानी बेच्ने योजना बनाएको छ । तर सुख्खा याम सुरु भएसगै नेपालका लाखौँ मानीसहरु शुद्ध पिउँने पानीको अभावमा तड्पी रहेका छन । एक दुई वर्ष होईन १ सय ३० वर्ष देखि सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालीका वडा नम्बर १२ को घारी बथानको गुईढुुंगका ४० र अड्डीका १२ घर गरी ६२ घर परिवार खाने पानीको अभावसंग संघर्ष गर्दै आएका छन । ६२ घरपरिवारको एउटा मात्र कुवा छ जसमा पशुचौपायले पनि पानी खाने गर्दछन । भने मानिस पनि त्यहि पानी पिउन बाध्य छन । १ गाग्री खाने पानी भर्न पनि एक बिहान कुर्नु पर्ने बाध्याता छ । तै पनि शुद्ध पिउने पानी पाउदैन्न गुईढुुंग र अड्डीका स्थानिय बासीले । पानी बेचेर समृद्ध बन्ने सरकारको ध्यान यता पुग्न नसकेको गुईदुंग र अड्डीका स्थानियबासीको भनाई छ । पुर्व पश्चीम राजमार्गबाट १२ किलो मिटर उत्तर रहेको गुई
नेपालको गण्डकी प्रदेश, तनहुँ जिल्ला म्याग्दे गाउँपालिका ३, किलचोकमा अवस्थित श्री अकलादेवीको महिमा बखान गर्दा यहाँ स्थित देवीका मुर्ति बनावटी नभई त्यही रहेको शीलामा शिंह र नन्दीको आकृति रहेको छ। मन्दिर भित्र भएको विशाल शीलालेखलाई नै आद्यशक्तिको रुपमा अकलादेवीको नामले पूजा गरिन्छ, जुन मन्दिरको गजुरसम्म पुगेको छ। अकला मन्दिरमा रातिको समयमा मन्दिर परिसरमा शंखघण्ट बज्नु, दिनमा भक्तजनहरु दर्शन गर्न आउँदा मन्दिर परिसरमा रहेका घण्ट आफै हल्लिनु, बाह्रै महिना कटहर फल्नु, रुद्र देवी मन्दिरको विशाल शीलाखण्ड जो कोहीले पनि हल्लाउन सक्नु आदिलाई दैवीशक्तिको कारणले भएको जनविश्वास छ। यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरुले गरेको भाकल र मनोकामना पुरा हुनु आदि कुराहरु छन्। यी मन्दिरको महिमा बुझेर योगी नरहरि नाथको सक्रियतामा २०५५ सालमा ८५ औं कोटीहोम लगाइएको थियो यसै गरी श्री अकलादेवी र रुद्रदेवी मन्दिरको स्तरोन्नति ए
यी काम गर्नुहोस् आमा खुवाउने औँसीको दिन, हुनेछ तपाईले नसोचेको लाभ !
यो वर्षको आमा खुवाउने औँसी बैशाख २१ गते परेको छ । आमालाई विभिन्न प्रकारले पुज्ने चलन रहेको छ । धार्मिक मान्यताअनुसार त्रेता युगको सुरुवात बैशाख महिनाबाअट नै सुरु भएको कारण बैशाख महिनामा पर्ने औँसीको दिनलाई विशेष मान्ने परम्परा रहेको छ । यो दिनलाई पितृ दोष या कालसर्प भएकाले पनि विधिवत रुपमा पुवा अर्चना गर्न सके विशेष लाभ हुने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । मातातिर्थ औसीको दिन पितृ मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि सफा शुद्ध भई उपवास बसे पितृलाई खुसी पार्न सकिने र जीवनमा हरेक कामहरु सफल हुने बताइएको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई आमा खुवाउने औसीको दिन गनैपर्ने केही कामको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । – आमा खुवाउने औसीको दिन पवित्र नदि, जलासय वा कुण्डमा गइ स्नान गरेर शुद्ध पानीमा कालो तिल हालेर पितृलाई तर्पण गर्नाले विशेष लाभ हुनेछ । – यस दिन गरिब दुखीलाई भोजन गराउने दान दक्षिणा
Apr282019 by read colorNo Comments
एजेन्सी । ज्योतिषका अनुसार सोमबारको कारक ग्रह चन्द्र हो र यसको स्वामी शिव हो। त्यसैले यो दिन चन्द्र र शिवसँग जोडिएका उपाय अप्नाउनु पर्दछ। शिव पुराणका अनुसार यो दिन ब्रत राख्दा र भगवान शिवको पुजा गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या हट्ने गर्दछन्। साथै परिवारमा सुख सान्ति भइरहन्छ। दुर्घटनाको योग र मृत्यु भयबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। ज्योतिषाचार्य मनिष शर्माका अनुसार सोमबार कुन कुन उपाय अप्नाउदा शुभ फल प्राप्त हुने गर्दछ। १) सोमबार साँझ सूर्यास्तपछि शिवको पुजा गर्नु विशेष महत्व मानिन्छ। किनकी सूर्यास्त हुनेवित्तिकै प्रदोष काल सुरु हुने गर्दछ। २) दिन र रातको बीचको समयलाई सन्धि काल भन्ने गरिन्छ। शिव पुराणका अनुसार अनुसार यो समय शिवजी प्रसन्न मुद्रामा रहने गर्दछन्। त्यसैले यो समयमा शिवको पुजा गर्दा भगवान चाडै प्रसन्न हुने गर्दछन्। यसरी गर्नुहोस् विशेष पुजा शिव मन्दिरमा गएर शिवलिंगमा दिप बाल
‘विवाह गर्छु भनी झुठो बोलेर राखिने यौन सम्पर्क बलात्कार हो’ यौन सम्पर्क गर्न मन तन मिल्नु प्रछ ।
‘विवाह गर्छु भनी झुठो बोलेर राखिने यौन सम्पर्क बलात्कार हो’ यौन सम्पर्क गर्न मन तन मिल्नु प्रछ । नयाँदिल्ली – यदि कुनै पुरुषको एक महिलासँग विवाह गर्छु भनी फकाएर यौनसम्पर्क गरी वाचा पूरा गरेनन् भने के त्यस्तो यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको छ । अदालतले यस्तो कार्यलाई बलात्कार नै ठहर गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । भारतको केन्द्रीय राज्य छत्तिसगढमा एकजना डाक्टरलाई लगाइएको अभियोगको महत्वपूर्ण सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय दिएको हो । ती अभियुक्त डाक्टरले ‘विवाह गर्छु’ भन्दै एकजना महिलासँग सहमतिमा यौन सम्पर्क गरेका थिए । तर पछि उनले अर्कै महिलासँग विवाह गरेपछि उनीविरुद्ध पहिलो महिलाले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । नागरिकतालाई सत्ता टिकाउने माध्यम बनाउँदै गए देश नै रहन्न: पूर्व अख्तियार प्रमुख उपाध्याय काठमा
कुनै मान्छेको उमेर ४० वर्षको छ । ऊसँग घरजग्गा छ, परिवारमा श्रीमती, छोराछोरी र आमाबाबु पनि छन् । व्यापार छ वा जागिर, आम्दानीको स्रोत गतिलै छ । छोराछोरी पढेकै छन्, लाउन–खानको पनि कुनै सुर्ता छैन । समाजमा महसुस गरिने सामाजिक हैसियत पनि कमजोर छैन । तैपनि, ४० वर्षे व्यक्तिको मन शान्त छैन । सुख र आनन्दको महसुस जीवनमा कहिल्यै गर्न पाएको छैन । ४० वर्षे व्यक्तिको मात्रै होइन, ५० वर्षे वा ६० वर्षे वा त्योभन्दा बढी वा घटीको पनि हालत उस्तै छ । मनमा लोभ त्यस्तै, अहंकार त्यस्तै, बेइमानीपन त्यस्तै । अरुलाई सकेसम्म होच्याउँदा क्षणिक आनन्द महसुस गर्ने आदत उस्तै । कुल मिलाएर सकारात्मकभन्दा कयौैँ गुणा नकारात्मक र खराब चिन्तन लिएर बाँचिरहेको अवस्था । यसको, उसको, त्यसको, यहाँ बस्नेको, त्यहाँ बस्नेको, जतासुकै बस्नेको पनि हालत उस्तै । यस्तो आखिर किन भएको हो ? सबै चीज भएर पनि केही नभएसरी अत्तालिएको मान्छेको यो
नेपाली वैज्ञानीकले दुनियाँ चकित ! फ्रीमा बोल्न मिल्ने फोन र अचम्मको बाइक बनाए जसमा चढेर १ लिटर पेट्रोल मै १२० किलोमिटर टाढा पुग्न सकिन्छ (भिडियो)
काठमाडौँ । पूर्ण बहादुर मगरले यस्तो अचम्मको ओके टोके फोन बनाएका छन जसलाई प्रयोग गरेर फ्रिमा बोल्न सकिन्छ । उनले निर्माण गरेको उक्त फोनबाट पाच किलोमिटर टाडासम्म कुरा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मगरले पेट्रोलबाट चल्ने बाइक पनि बनाएका छन । जुन बाइकमा चढेर एक लिटर पेट्रोल मै १०० देखि १२० किलोमिटरको दुरी पार गर्न सक्ने उनको दावी छ । उक्त बाइक सम्म ठाउमा मात्र नभएर उकालोमा पनि कुद्न सक्ने बताए । मगरसंग गरिएको कुराकनी हेर्नुहोस : युवा समूहले राति जबरजस्ती तानेर लगी दुईजनाको पत्नी भएको घोषणा गरेपछि हिमालपारिको गाविस बिही-९ ड्याङकी २४ वर्षीया युवती हुन् पेमा लामा। उनी अहिले मानसिक तनावमा छिन्। वैदेशिक रोजगारीमा पाँच वर्ष लेबनान बसेर फर्केकी उनलाई युवा समूहले राति जबरजस्ती घरबाट तानेर लगी दुईजनाको पत्नी भएको घोषणा गरिएको छ। यो त्यहाँको सामाजिक परम्परा भए पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार्न उनको मन तया
लगानीकर्ताले ४० हजार तिर्छन तर विष्णु माझिको मुख देख्न पाउँदैनन् ! यसरि गाउछिन विष्णुले… (5)
कृष्ण र रुपाले डष्टबिनमा भेटिएका बच्चालाई छोरा बनाए ! सबैले शेयर गरौं (भिडियो हेर्नुहोस) (4)
दोलखा भीमसेन र कालिञ्चोक भगवतीको महिमा,ॐ लेखी दर्सन गर्नुहोस् (4)
हिसाब मिल्दा मोज गर्ने नमिल्दा बलात्कार भयो भनेर झुटो आरोप लगाउने महिलालाई पनि सजाय हुनुपर्छ… (4)
आमा ! हामीलाई विचल्लीमा छाडेर गएपनि तिमि त खुसी छौ होला है ! मनमा बुवा नर्फकने थाहा भएपनि… (3)
म भित्र दुःखका काँडाहरू थुप्रै छन् जसले घोचेर म पटक–पटक रोएकी छु : हिमानी शाह (3)
बढी मोटाएर तनाबमा हुनु हुन्छ ? बन्दा काउलीबढी मोटाएर तनाबमा हुनु हुन्छ ? बन्दा काउलीको सुप,… (3)
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं ! (107)
३ करोड नेपालीको लागि खुसिको खबर : यी हुन् महान नेपाली महिला जसले बनाइन् क्यान्सर निको पार्ने… (99)
पुरानो भन्दा पुरानो दादलाई ३ दिनमै निर्मुल पार्ने यो चमत्कारिक घरेलु औषधी, जानीराखौँ (79)
साबधान ! आमा-बुबाको यस्तो सानो गल्तिले नै “तेस्रो लिङगी”जन्मिनछन्!! (43)
कण्डम बिना नै बच्चा नबस्नेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? यस्तो छ डा. नुतनको सल्लाह (27)
११ बर्षिया “भावना” भन्छिन, बच्चा जन्माउन साथ “खेल्न” गए (भिडियो कुराकानी) (25)
कुकुरसँग किन यौन सम्पर्क गर्छन् महिलाहरु हेर्नुहोस् आज थाहा पाउनु होस ।। (23)
हर्ट–अट्याक हुनुभन्दा १ महिनाअघिदेखि शरीरले दिन्छ यस्ता संकेत: बेवास्ता नगरौ -मृत्युबाट बचौं (23)